मृत्युसंगै भाग्य न्यौपाने र शिशिर भण्डारीको प्रतिक्षामा नन्दकुमारी प्रधान... (भिडियो सहित)
१० श्रावण, २०७६
एउटा यस्तो जीवनी ,जसलाई सुन्ने र हेर्ने ,देख्ने नरोई बस्न सक्दैन । भनिन्छ नि " सोचे जस्तो हुन् जीवन" । सायद सत्य यहि हो कि जीवन न सोचे जस्तो हुन्छ न चाहे जस्तो । मानिसको जीवन जसको बरदान हो उसैको खेल हो । भाग्य र भगवान सायद एकै शब्दका दुइ अर्थ हुन् त्यसैले त् न भगवान देखिन्छ न भाग्य थाह हुन्छ । यस्तै भाग्य ,भगवान अनि आशामा बितिरहन्छ मानिसको जीवन । खुसि हुने ,रमाउने र सुखी हुने अनि लामो आयु बाच्ने रहर कसलाई हुन्न र? तर समय र परिस्तिथि अनि भगवानप्रतिको बिस्वास र भाग्यको खेल कहिले कहिँ नचाहदा नचाहदै पनि जीवन सोच अनि आशा भन्दा फरक दिशातिर मोडिन जान्छ र ठिक बिपरित भैदिन्छ । यस्तै छ मानिसको जीवन ।
जन्म लिईसकेपछि कसलाई बाच्ने रहर हुन्न र ? बाच्ने मौकानै पाईसकेपछि कसलाई खुसि र सुखी रहन मन हुन्न र ? मानिस हो बिबेकशील प्राणीमा गिन्ती भईन्छ र बिबेकशील भएसी कसलाई राम्रो ,नराम्रो अनि सुख ,दुख र स्वास्थ्य अनि समस्याको ज्ञान हुन्न र ? यस्तै बिभिन्न विभिन्न शब्द अनि कारणहरुमा अझिदै बाचिरहेकी छिन सिन्धुपाल्चोककि एक महिला नन्दकुमारी प्रधान । सानै अर्थात् करिब १४/१५ बर्षको कलिलो उमेरमै परिवारले १८ बर्ष जेठो व्यक्ति संग बिबाह गरिदियो र नेपाली अनि हिन्दु समाज जहाँ एक पटक सम्बन्ध गासिएसि बन्धनमै गासिए झैँ हुन्छ जीवन त् । यस्तैमा उनि सानी अनि परिवारको स्वीकृतिले बिबाह । जीवन सुख ,दुख , जसो तसो चलिरहेकै थियो र उनले सन्तानको रुपमा पहिलो छोरी र दोश्रो छोरा समेत पाए । अझै पनि दुइ सन्तान अनि दुइ गार्जेन को सुखी अनि सानो परिवार बनेको थियो । तर दुर्भाग्य भन्छिन नन्दकुमारी प्रधान एक दिन सब सुखी ,खुसि अनि जीवन नै तहस नहस भयो । घरायसी बिबादले बिकराल रुप लियो र परिवारमा जानी र नजानी दुवै पक्षले एकको मृत्यु भयो र उनको श्रीमान जेल चलानमा कारागारमा परे
त्यस कालो दिन देखि आज सम्म नन्दकुमारीको मुहारमा हासो त् मात्र सम्झना हो उनि यसो अरुलाई दुख लुकाएर हासेको झैँ पनि गर्न सकेको छैन । परिवार भनेको सब सदस्य संगै हुनु र सुख ,दुख साथ बिताउन र महसुस गर्न पाउनु हो तर उक्त ९ बर्ष अगाडिको त्यो कालो दिनदेखि नन्दकुमारी बस्ताबमै एक्लिएको र मात्र बरदान स्वरुपी जीवनमा पात्र बनेको उनको भनाईरहेको छ । श्रीमान जेलमा ,घरमा साना साना दुधे नानीहरु र आफु एक्लो अनि परिवारबाट तिरस्कृत । सम्झिदै उनि बोल्न सक्दिनन र रुदै बल्ल बल्ल आफ्नो पिडा सुनाउछिन श्रीमान जेल बसेपछि परिवारले घरमै नबसोस भन्ने व्यवहार गरेपछि छोरा छोरी जुन आमाको लागि मुटुको टुक्रा भन्दा कम हुदैन तर त्यी नाबालकहरुको जीवन अनि भबिस्यलाइ सम्झिएर उनले एक आश्रममा राख्न बाध्य भए र आफु पानी बेसाहार भएकोले बहिनिले आफु काठमाडौँमा कोठा लिएर बसेको हुनाले दिदिलाइ सहारा बन्ने सोचले आफुलाई काठमाडौँ ल्याएको उनको भनाई रहेको छ ।
तर दुखि मान्छेको दुखिनै दिन चर्या अनि दुखि नै भाग्यको खेल । दुर्भाग्य भानुम कि के के । नन्दकुमारी बहिनीको सहारामा बस्न आएको भोलि पल्टनै स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएकोले अस्पताल भर्ना हुन पुग्यो र आज सम्म पनि उनि पुन स्वास्थ्य अवस्थामा आउन सकेको छैन । बेसाहारा ,श्रीमानको साथ बिहिन अनि परिवार छताछुल्ला । यस्तो अवस्थामा जो कोहि पनि बिरामी पर्न सक्छ तर नन्दकुमारी भने स्वाथ्य बिग्रेकै कारण उपचारको क्रममा ४/५ लाख सम्म ऋण गरेको र सम्पूर्ण ऋण बहिनीले कम गर्दै तिरेको बताउछिन । बहिनि एक अभिभाबक भन्दा कम रहेन छ । दाजु भाइ सबै हुदा पनि उनि माईति बिहिन भएको महसुस गर्दै रोइरहछिन ।दिदिकोइ उपचारको निम्ति बहिनि पनि बैदेशिक रोजगारमा गएको र ऋण तिरेको भन्दै उनि बहिनीलाई धन्यवाद दिदै आखा भारी आशु निकल्छीन । अझा आफ्नो स्वास्थ्य बिग्रिदै गएको र औषधि दिनहु जसो खानु पर्ने अनि चेक जाच गराई रहनु पर्ने भएकोले पैसा जुताउनकै निम्ति पुन बैदेशिक रोजगारमा रहेको उनि बताउछिन । आफ्नो बैबाहिक परिवार भन्दा पनि दिदीको सेवामा लागेको त्यी बहिनिलाइ सबैको धन्यबाद ।
अहिले बहिनीले समेत कामेक पैसाले ऋण तिर्न गाह्रो भएको हुनाले हिजो आज सामाजिक संजालमा सहयोगी मनहरुले दिन दुखिहरुलै सहयोग गरेको देखि रहदा बहिनीले दूबईबाट दिदिलाइ मिडियामा आएर सहियोगमा माग राख्ने सल्लाह दिएकोले नन्द कुमारी मिडियामा आएको बताउछन र उनले युट्य़ुब मा हेर्दा अनि दायाबाया साथि सर्कल र आफन्तको कुरा सुन्दा अहिले समाजसेवामा अब्बल रुपले लागिरहेका कलाकार शिशिर भण्डारी र अर्को सामाजसेविमै सहयोग जुटाउदै प्रदान गरिरहेका भाग्य न्यौपानेलाइ समेत सम्पर्क गरिसकेको तर दुवै पक्षबाट कुनै पनि सल्लाह र सुझाब अनि सहयोगको आश नपाउदा नन्दकुमारी अहिले मृत्युको पर्खाईमा रहेको उनि बताउछिन ।
नन्दकुमारी कतै हिडडुल गर्न नि नसक्ने,खुट्टा चलाउन गाह्रो हुने ,जिउ भारी हुने अनि आलस्यता अनि गल्ने हुदा उनि कोठामा एक्लोई बसेको छ र सहारा नहुदा ,परिवार साथ् नहुदा निकै दुखि हुने गरेको उनि रुदै भन्छिन ।
शुक्रबार १० श्रावण, २०७६ १२:१२:०० मा प्रकाशित